Wepụta ihe nkiri Halloween na egwuregwu kachasị egwu | Akụkọ akụrụngwa
Wepụta a nkiri Halloween na kasị egwu egwu egwuregwu
N'abalị nke ndị nwụrụ anwụ adịla ebe a na abata Mundivgames Anyị enweghị ike iche maka ụzọ kacha mma iji mee ememme a emere na USA karịa ịnụ ụtọ Halloween nwere egwuregwu ụfọdụ na utu aha kachasị mma anyị nwere maka usoro egwuregwu vidio ugbu a, ọ bụ ezie na n'ezie, anyị agaghị echefu ịkọpụta ozu ochie mana ka dị ọhụrụ nke ndị ochie.
Ọ bụrụ na n'etiti atụmatụ nke abalị gị nke Halloween Ọ gụnyere itinye esemokwu awa ole na ole n'ihu ihuenyo-ma ọ bụrụ na ọ nọ na ụlọ ọrụ, nke ka mma-, nọrọ ọdụ ma hụ ezigbo ndụmọdụ ndị anyị na-eweta gị n'okpuru. Atụla egwu, enweghị aghụghọ ebe a, naanị ndị lanarịrị olu na spain.
Ọ bụrụ na ị masịrị Ebe Nwuru Anwu, ndị okike ya alọghachila na ntinye ọzọ iji kpochapụ zombies nke ukwuu na akwara nke aha ahụ: -anwụ Light na-atụ aro ka anyị lanarị n'ọnọdụ dị oke egwu juputara na ndị nwere ọrịa chọrọ ịmịpụ ezé anyị, ebe anyị ga-eme ngwa ọgụ na ngwa ọrụ anyị iji lanarị ma gbanahụ ọdachi ahụ.
Egwuregwu Frictional, ndị edemede nke sagas Ọchịchịrị y obi nchefu, ozokwa ha akara akara oke egwu nke ordago. Soma bụ njem dị egwu n'okpuru omimi nke oke osimiri nke na-etinye anyị n'ọ ọdachi ga-eme n'ọdịnihu ebe akụrụngwa ahụ Pathos-nke Abụọ ha nwere ọrụ dị mkpa. Igwe ndị dị na akụrụngwa ga-amalite ịzụlite nghọta mmadụ na nke a ga-abụ naanị otu n'ime nsogbu ndị anyị ga-eche ihu.
ruo mgbe Dawn
Cablọ dị n'ọhịa dịpụrụ adịpụ na snow, ihe egwu na-eru, ọnwụ na-atụghị anya ya na ndị protagonists ndị ndụ ha na-atụkwasị na eri. Ha dị ka ihe eji eme ihe nkiri egwu egwu site na iri afọ gara aga, na n'ụzọ, ruo mgbe Dawn Ọ bụ ụtụ dị ebube nye ihe nkiri ndị ahụ -n'ebe ụfọdụ esere na echiche ndị ọzọ na ụfọdụ ọrụ site n'aka Wes Craven- mana ọ bụ egwuregwu vidiyo ka mma: mkpebi a ga-emetụta mmepe nke akụkọ ahụ n'onwe ya yana usoro ọ bụla ị na-aga n'ihu nwere ike bụrụ njedebe na-atụghị anya ya. ruo mgbe Dawn bụ otu n'ime ihe ịtụnanya nke afọ a maka PlayStation 4, na ihe ịga nke ọma ya bụ na e nweelarị ọhụụ ọhụrụ na mmepe yana ọ ga-adaba PlayStation VR.
kpolat bụ egwuregwu vidiyo dabere na egwu Ihe omume Dyatlov. Na 1959, ụmụ akwụkwọ itoolu na-eto eto Russia furu efu n'ihe a na-akpọ ugwu ọnwụ ma emechaa chọta ozu ha n'ọnọdụ ndị ọzọ: ụlọikwuu ha esi n'ime pụta, dị ka a ga-asị na ha na-agba mbọ ịgbapụ ihe, a chọtara ha nwụrụ na mpaghara obere ogige ahụ, ụfọdụ na-enweghị ebe mgbaba, na-eweta ihe ijuanya ọnya ịwa ahụ, ma nke kacha enye nsogbu, ahụ ha nyere radieshon. Ndị bi ebe ahụ doro anya nke ọma na ebe a bụ ebe a na-ezere na ọhụụ nke ihe ọkụ na-ahụkarị na mpaghara ahụ. Gịnị mere ebe ahụ? kpolat Ọ na-atụ aro ka anyị gafere ebe ndị ahụ na-atụ nrọ na-achịkọta ndetu iji dokwuo anya ihe gaara eme ndị ahụ metụtara ihe omimi a na-achọpụtabeghị na ọ nwere olu onye omee ahụ Sean agwa dịka onye na-akọ akụkọ.
Ọjọọ Ọjọọ HD Remaster
Nyocha a nke kpochapụwo Resident evil 1996 bu ihe atu nke otu esi emegharia. Igwefoto edoziri, sụgharịrị ndapụta, ngalaba nlele a nụchara anụcha, mgbagwoju anya, ihe nro nro na ihe isi ike bụ ngwa nke Ọjọọ Ọjọọ HD Remaster, nke ọgbọ ole na ole gara aga bụ otu n'ime ihe kachasị ike nke nghọtahie ahụ Egwuregwu Cube -magbanyeghi na emesiri gbanwee ya Wii-. Ọ bụ oge zuru oke ịbịaru saga Resident evil ma ọ bụ icheta nnukwu oge na ihe, maka ọtụtụ, bụ egwuregwu kachasị mma na zombie saga nke Capcom.
Nkpughe nke Obibi 2
Anyị na-aga n'ihu na Resident evil na nke ugbu a ọ bụ oge nke Mkpughe 2, aha ebe anyi ji achikota ndi odide dika Nwankwo Claire o Barry burton. Usoro ihe omume a na-atụ aro ngwakọta ụjọ, mgbagwoju anya na ihe ọ bụla na-atọkwa ụtọ. Na mbu, emeputara ya na usoro episodic ma site na dijitalụ, mana ugbu a ị nwere ike ịzụta egwuregwu zuru oke na mbipụta anụ ahụ yana mgbakwunye na ọnụahịa asọmpi pụtara.
Zero V: Nwa agbọghọ nke Mmiri ojii
Saga Zero Project -o Frame Fatal n'ala Uncle Sam- na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ụwa dị egwu nke ghosts na iji igwefoto oge ochie nke na-enye anyị ohere ịlụ ọgụ megide ụlọ ọrụ ndị a. Ohere nke iwu nke Wii U Ọ dabara na egwuregwu ahụ dị ka uwe aka na, n'agbanyeghị na ọ bụghị aha kachasị mma na saga a - anyị niile na-aga n'ihu na-atụle Utu urukurubụba dị ka ndị kasị echefu echefu-, ọ bụ a ukwuu tụrụ aro nhọrọ maka soulless Wii U, nke na-adịchaghị mma na mmemme nke ụdị a - ebe ahụ ka anyị nwere nke mbụ Nkpughe Ọjọọ bi o ZombiU, nke ruru na nyiwe ndị ọzọ n'afọ a.
Ise ehihie na abalị Freddy si 4
O doro anya na ọtụtụ n'ime gị amatalarị pịa a ma chebe ndụ. Ọnwa Ise na Freddy's na-atụ aro anyị ka anyị dịrị ndụ na gburugburu ebe ndị na-eme ihe na-adịghị mma dị ka ha dị ka ihe kacha mkpa. Omuma ndi ozo di ugbua na nke ano ya na nke ahu bu otu n’ime egwu di egwu nke kachasi ike n’etiti ndi n’eto eto.
Ndị ọzọ na-atụ aro
Anyị enweghị ike ileghara aha ndị ọgbọ ugbu a anya dị ka egwu Outlast, nke remasting nke Oge Ikpeazụ nke Anyị ma obu ebube Ọbịa: O Nweghị, egwuregwu atọ nke àgwà na-enweghị mgbagha. Ma ọ bụrụ na ị bụ ntakịrị ihe ọhụụ ma ị banyeghachi azụ, anyị nwekwara ezigbo mmemme nke anyị na-akwado ka ị lelee ma kpuchie nyiwe dị iche iche: Echo Night: Na-agafe, Achọpụtaghị, Onye Ọjọọ Bi Ọjọọ 2, Egwu Ọjọọ Ọjọọ, Onye Ọjọọ 4 Ọjọọ, Zlọ Ọrụ Zero 2: Crimson Butterfly, mbụ trilogy nke Ugwu gbachi nkịtị, Ọchịchịrị ebighi ebi, Hellnight, Oghere Nwụrụ Anwụ, Ihe ahụ, Kuon, Egwu Oyi, Ọchịchị nke Rose, Clọ Elu Elekere 3, Egwu Na-atụ Egwu, Ala Mkpagbu, Iro Iro o Naanị Ọchịchịrị: Onye Ọhụụ Ọhụrụ.
Anyị na-atụ na anyị nwere ikwu na-nnọọ mma ka ị na anyị chọrọ ka ị, si Mundivgames, obi ụtọ na ụjọ Halloween.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Wepụta a nkiri Halloween na kasị egwu egwu egwuregwu
Ezigbo ihe atụ nke otu ịntanetị nke ihe nwere ike isi melite ndụ anyị
Ihe nkiri 10 na-atụ egwu zuru oke maka abalị Halloween